Bisikileta KHS tsara ve? - Valiny Tsara Indrindra
Tena > Valiny Tsara Indrindra > Khs bisikileta famerenana - valiny amin'ireo olana
Khs bisikileta famerenana - valiny amin'ireo olana
Bisikileta KHS tsara ve?
Ny $ 529KHSFlite 150 dia làlana voalohany lehibeBisikileta. Ity lalana itybisikiletamanolotra fahombiazana lehibe, fahaiza-manao zavatra, ary ny sasany antsipirihany mahagaga. Iza no tokony mividy azy: Mpitaingin-tsoavaly mitady lalana azo itokisanabisikiletatoy izany ihanytsaraamin'ny fiara-mandeha isan'andro raha amin'ny MS150.1 apr 2019
Mpampiresaka 1: Superbike. Ny bisikileta an-tendrombohitra dia mety ho lafo tokoa amin'izao andro izao. Maty i Carbon, Titandas.
Raha ny marina dia tsy dia sarotra ny mandany £ 10.000 amin'ny bisikileta. Ny sasany amin'ireo mpanamboatra lehibe indrindra dia manana superbike ivelan'ny talantalana, na afaka mandeha amin'ny marika butik- Route ianao ary manana zavatra toy ny Pole, marika Finnish izay manamboatra bisikileta enduro avo lenta eto an-tany. Mpampiresaka 2: Whoa, whoa, whoa Premium Neil.
Tsy mila mandany vola amin'ny bisikilety an-tendrombohitra ianao, ity VooDoo Hoodoo ity dia mitentina 375 pounds ho ahy, fa bisikileta an-tendrombohitra mety tokoa. Mpampiresaka 1: Tsy nilaza aho fa nandany ny vola, fa rehefa manana an'io ianao dia mitentina manodidina ny £ 8000 ity Pole Stamina ity, ity ny kitapoko EN izay Pole Stamina ahy izay mitentina € 7,950. Na izany aza, nasiako fanavaozana manokana manokana eto, ny frein Trickstuff Direttissima sy ny faritra misy ny SRAM.
famerenana ny spectral canyon
Saika hatramin'ny tampon'ny tsipika LE izao, ary izao bisikileta izao dia manodidina ny € 9,000 na manodidina ny 8 30000. Na dia tsara jerena aza ireo supercar dia ho henonao ny fanamboarana sy ny fikojakojana izay mitentina amina hetsy amin'ny Ferraris. Ahoana ny fiainana miaraka amin'ity superbike ity? Inona no mitranga rehefa lany ny lamasinina mitondra fiara? Avy eo dia mila mikohaka ianao.
Ity cassette SRAM XX1 ity dia manodidina ny £ 400, $ 450. Ny mpandahateny 2: Mihoatra ny bisikiletako. Mpikabary 1: Ie, fa tsiky maro isaky ny kilao.
Mpampiresaka 2: Aleo kokoa. Na izany na tsy izany, ndao hojerentsika ny tena maha samy hafa ny superbikeo sy ny bisikiletako mora vidy. Mpampiresaka 1: miditra ianao.
Mpampiresaka 2: Hazakazaka mitaingina hazakazaka ireto fa tsy fampisehoana soavaly. Tsy hita amin'ny alàlan'ny solomaso Dior mandritra ny tontolo andro. Mpampiresaka 1: Dior? Misimisy kokoa toa ny SRAM Access.
Mpampiresaka 2: DIOR no tiako holazaina. Mpandahateny 1: Tsy mitombina. Mpampiresaka 2: Andao atomboka amin'ny fandrefesana tsy ara-dalàna tanteraka, satria maninona? Andao hojerentsika izay azonao amin'ny volanao ara-batana.
Vidiny isaky ny kilao. Ny VooDoo Hoodoo dia bisikileta an-tendrombohitra misy fidirana an-kitapo. Mandany vola £ 600 vaovao, milanja 14,35 kilao.
41 kilao isan-kilao izany. Ho an'ity varotra faharoa ity, 375 pounds izany, 26 pounds isaky ny kilao. Mpampiresaka 1: The Pole Stamina dia masinina hazakazaka enduro CNC vita amin'ny aliminioma CNC miaraka amina fitsangatsanganana 180 mil, raha azo atao dia zava-dehibe kokoa noho ny lanjany manontolo, izay tsy natao ho an'ny lanjany maivana.
Tonga amin'ny 14,7 kilao. Mahaliana fa izy ireo dia akaiky ny lanja fa tsy fampisehoana.
Mpampiresaka 2: Andraso kely, tsy fantatrao ny Mpampiresaka 1: £ 561 ny kilao. Mpampiresaka 2: Inona? Andao hiverina amin'ny fampitahana fiara. Ford Fiesta dia mitentina £ 14 kilao.
Ferrari 812 Superfast, £ 153 isan-kilao izany, saingy misy kilao maromaro kokoa ao Ferrari. Mpampiresaka 1: mandeha amin'ny bisikileta mora vidy ny boriborintany voalohany. Round roa, faniriana.
Eny, b Ikes dia miresaka momba ny fiara ihany, fa maro amintsika no te hipetraka am-pitoerana sy mitafy ireo soavaly tsara. Andao hizaha toetra ny manintona bisikileta tsirairay amin'ny alàlan'ny fametrahana azy ireo any ivelan'ny kafe mba hahitana raha toa ny fihetsiky ny besinimaro amin'ny besinimaro ihany koa ny fahatsapana ho an'ny superbike, izao azafady miala, ity ny bisikiletiko bisikileta mora mifanohitra amin'i superbike. Mpampiresaka 2: Azo ampiharina.
Manome fanamby anao aho handeha hamonjy ireo magazay ary hamela azy any ivelany na hahazo fiantohana amin'ny halatra aza, nahazo quote aho, ny vidin'ny VooDoo dia £ 71 isan-taona. Mpampiresaka 1: 520 £ izany, saingy tsy miala eo anilako izany. Mpampiresaka 2: Ahoana ny amin'ny fitsangatsanganana an-tanety amin'ny faran'ny herinandro iray, mitsambikina ny loto amin'ny manaraka, lalan'ny paompy? Famonosana bisikileta kely? Mpampiresaka 1: bisikileta enduro ity.
Izy io dia afaka mitazona siny tavoahangy telo, ary izany dia natao ho an'ny bisikileta an-tendrombohitra mety. Afaka mitaingina hazakazaka EWS ianao, mihazakazaka miankandrefana, mandeha epic mamaky ala Welsh. Mpampiresaka 2: Eny ary, na ahoana na ahoana.
Andao atao hoe fatorana, roa isaky ny mandeha. Mpampiresaka 1: Eny ary, mandohalika ary manandrama manaraka. Alefazo aloha.
Vonona ve ianao? Ny telo, roa, iray, mandeha. Mpandahateny 2: Raiso ity zazalahy manintona ity. Mpampiresaka 1: Na izany aza, ataovy ny fitsapana manaraka.
Mirary anao ho tsara vintana. Tsy midika izany ianao. Tsara izany, fitsapana ho an'ny frein.
Vonona ve ianao? Telo, roa, iray, miandry. Mpampiresaka 2: Inona ilay? Ahoana? Samy manana freins hydraulic isika. Mpampiresaka 1: Eny, izany no Trickstuff, ilay fanosotra injeniera alemana.
Miaraka amin'ny lisitra fiandrasana herintaona, raha tena tianao ny hividy azy dia miala sasatra amin'ny 450 euro. Mpampiresaka 2: 900 €? Mpampiresaka 1: Ie. Andao mahatsapa fa tsy nisy nilaza fa ho mora ny hatsarana, ary manana kodiarana enduro mety aho, fitambarana mahafaty.
Inona? Tady hafa? Mety handresy ve ny bisikileta mora vidy? Mpampiresaka 2: fampisehoana làlana. Andraso segondra. Mampitaha ny paoma amin'ny voasary ve isika eto? Ny bisikiletanao dia misy lalana 180 mil eo aloha sy aoriana.
Hardtail ity. Fanamafisam-peo 1: teknolojia. Mpampiresaka 2: Tsara izany.
Andao atomboka amin'ny zavatra fantatro fa tokony ho tsara ity bisikileta ity, ny lalan'ny paompy. Okay. Vonona ve ianao? Telo, roa, iray, mandehana.
Dia tohizo. Noheveriko fa mpamily hazakazaka ianao. Mpampiresaka 1: ny Hardtails no tompon'ny lalan'ny paompy.
Maharitra 1,3 segondra ny fandresena. Izao dia miankina amin'ny fanamby manaraka, raha manana vintana handresena amin'ny ankapobeny mihitsy ny Poloney.
Mahitsy. Fisondrotana ara-potoana. Ankehitriny ny géometriako dia natao hitondra ahy tsara any an-tampon'ny havoana, hanapoaka baomba indray.
hatraiza ny halavitry ny bisikileta hiasa
Mitovy ny lanjany fa ny dia ataoko 180 mil sy ny kodiarana enduro lehibe ataoko dia tsy hahamora ny poly, fa handoa izy ireo. Mpampiresaka 2: Alao mialoha ny fialan-tsiny. Mahitsy.
Jereo ity. Mpampiresaka 1: Haingam-pandeha indray amin'ny fiakarana, saingy nanantena izahay fa izao. 7.3 segondra mialoha ny bisikileta mora vidy.
Ny Pole dia betsaka ny zavatra tokony hatao amin'ny fitsapana ora. Mpampiresaka 2: Araraoty ary. Misy zavatra tsy mandeha? Mpampiresaka 1: Na izany na tsy izany.
Na izany na tsy izany, midina ambany ny raharaha ankehitriny. Mpampiresaka 2: tsy maninona ve ianao? Inona no ataonao? Mpampiresaka 1: Mangina. Mpampiresaka 2: Toa matotra sy haingana be ilay izy.
Na izany na tsy izany dia mbola tsy vonona aho. Mpampiresaka 1: Ankehitriny ilay superbike. Ny Pole dia ao anatin'ny tontolo voajanahariny.
Mila fandresena mahatalanjona amin'ny fidinana, 12 segondra mihoatra ny hardtail. Amin'ny fidinana fohy izay fandresena lehibe. Mpampiresaka 2: Tsara izany.
Mandresy ianao, fa ny hardtail mora dia tsara kokoa amin'ny zavatra sasany, raha mandeha haingana mamaky ny ala ianao, mitobaka eo amin'ny lalan'ny paompy, mitsambikina vitsivitsy mankany am-pianarana, rehefa mandeha. Tena ara-tsaina izany. Ity bisikileta ity dia tena tsara kokoa amin'ny hoe Hatraiza ny faran'izay tsara amin'ny Grand Bike 9 amin'ny ankapobeny? Mpampiresaka 1: Aza esorina ny zava-manitrao, izay mahafinaritra anao.
Raha ny marina, Blake dia mitaingin-tsoavaly mega avalanche, angamba ny hevitra adalany indrindra hatrizay. Izany dia milaza zavatra ho an'i Blake. Ity, natao ho an'ny zavatra samihafa.
Miresaka hazakazaka mandritra ny andro maromaro isika, dingana fiaretana, hazakazaka EWS. Ity ny bisikileta. Hardtail, tsy ho vitanao izany.
Ity zavatra ity dia mitsoka ny rano Misy traikefa be dia be amin'ity bisikileta ity, ny R sy D, ny fanehoan-kevitra avy amin'ireo matihanina. Momba ny volavolan'ny bisikileta sy ny zava-bitany io. Fitsarana superbikes no tsaraina eto.
Eny, mila paosy lalina ho an'ity bisikileta ity ianao, fa mila ny làlambe any an-trano na lavenona ampy handehanana any Whistler na Madeira, avy eo ny andro falifaly. Tsara izany. Mpitantara 2: tsara ny Hardtails, indrindra ny mora vidy.
Tompon'andraikitra amin'ny fampahafantarana olona marobe amin'ny tontolo mahafinaritra amin'ny bisikileta an-tendrombohitra ianao, fa rehefa miresaka momba ny hazakazaka, andiany azo zakaina, fidinana na zavatra hafa toa izany isika dia tsy mitovy asa io. Mazava ho azy fa misy banga be eo afovoan'ny toerana misy ny ankamaroan'ny olona momba ny vola laniny amin'ny bisikiletany. Ny tombony dia miakatra hatramin'ny 300 pounds ka hatramin'ny 3000 pounds haingana be.
Aorian'izany dia toa kely kokoa ny dingana isaky ny pounds na dolara. Tsy midika izany fa tsy eo izy. Ho an'ny olona sasany, ny tapakila mora vidy amin'ny tanana faharoa dia tapakila fotsiny.
Mahafinaritra. Tsy momba ny bisikileta fotsiny izany fa ao amin'ny klioba bisikileta an-tendrombohitra daholo isika. Mpampiresaka 1: Voalaza tsara, Neil.
Mpampiresaka 2: Misaotra Neil.
Aiza no anaovana bisikileta KHS?
Raha marina isika, ny fanavaozana sy ny fanodinana ny bisikiletanao dia mety ho lafo be. Raiso ireto kodiarana High Roller II ireto, ohatra. Tsara izy ireo, saingy handany $ 130 ka hatramin'ny $ 150 ho an'ny iray set.
Misy zavatra toa an'ity kasety nify 11-50 avy amin'ny SunRace ity izay hanome ny bisikiletinao amina taonina isan-taonina nefa hamoaka $ 100 avy ao amin'ny poketranao ary toy ny hoe ho lany ny kodiarana amin'ny farany. Mampatahotra ihany, sa tsy izany? Ahoana raha lazaiko aminao ny zava-drehetra eto amiko dia ambany noho ny $ 80? Araho hatrany, hasehoko anao ny fomba hitahiry vola iray taonina amin'ny fividianana bisikileta manaraka. (mozika mahafinaritra) Ry olon-drehetra, Joseph no anarako ary tongasoa aho, azoko antoka fa betsaka aminareo no manontany tena raha nividy kojakoja nangalarina aho na raha nanao fifanarahana fanohanana manokana aho mba hahamora izany rehetra izany.
Tsia ny valiny, hasehoko anao hoe aiza no hahazoako faritra vaovao na kely ampiasaina amin'ny fihenam-bidy lehibe. Ankehitriny ianao dia mila faharetana kely mba hiasa ity. Betsaka amin'ireo toerana ireo no manana lisitra voafetra ka tsy mila mahafantatra izay hotadiavina fotsiny ianao, fa mila mijery zavatra matetika.
Na izany aza, hahazo valim-pitia be ianao. Na izany aza, tsy fanoloana ny mpivarotra tianao na fivarotana bisikilety eo an-toerana io. Mila zavatra dieny izao, ampiasao azafady.
Te-haka fotoana kely hiresahana momba ireo faritra efa niasa amin'ny ankapobeny aho. Tsy tsiambaratelo fa afaka mahita fifanarahana tsara amin'ny bisikileta feno ianao na ny fork aloha aza rehefa mividy zavatra efa zatra amin'ny Pinkbike, eBay na Craigslist. Raha lazaina izany dia tena mila fantatrao izay fanontaniana hapetraka ary inona no hotadiavina hahazoana antoka fa tsy mahazo ampahany ratsy ianao na voafitaka fotsiny.
Na eo aza izany, ny mpivarotra dia marin-toetra tanteraka indraindray, saingy tsy tsapany akory fa ny anjarany dia ratsy endrika noho ny noeritreretin'izy ireo. Ka noho izany, tsara kokoa ny mamela an'ity karazana fihazana varotra ity ho an'ireo olona izay tena mahalala izay fanontaniana tokony hapetraka sy izay hotadiavina, andao hirosoana. (mozika maneso) Raha mampiasa eBay ny ankamaroan'ny olona mba hividianana zavatra efa niasa, dia toerana tsara hividianana zava-baovao amin'ny fihenam-bidy mendrika izany.
Ary tsy miresaka momba ny fanapahana sinoa manimba tena manimba tena aho aorian'ny dia iray nataoko. Maro amin'ireo mpivarotra bisikileta an-tserasera ankafizinao no mivarotra ny lisitra ao amin'ny eBay eBay. Ny ankabeazan'ireo entana ireo dia amidy amin'ny vidiny mitovy amin'ny hitanao eo amin'ny pejin'izy ireo, na izany aza misy ny entana izay manana karazana tahiry be loatra atolotray miaraka amin'ny safidin'ny lisitra tolotra tsara indrindra.
Manampy anao amin'ny vidiny ambany kokoa ity, fa aza manambony tena - tsy hahazo vola 50% ianao fa afaka manampy anao hitahiry vola etsy sy eroa arakaraka ny entana. mileage mety miovaova, fa mendrika ny hanandrana. Tsikaritro ihany koa fa fivarotana bisikileta kely maro kokoa no mitahiry ny fivarotana eBay avy ao aorian'ny fivarotany mba hivarotra entana lafo vidy na entana misokatra. Nametraka zavatra amin'ny lavanty mihitsy aza izy ireo indraindray, izay fitahiana kely mifangaro satria raha ianao irery no mitady an'ity entana ity dia afaka mahazo zavatra amin'ny fihenam-bidy tena mendrika ianao.
Raha tsy izany dia hahita ady an-trano miaraka amin'ny olona 50 hafa ianao, ary mirary soa. Te hampisongadina ihany koa aho fa tena mila mitandrina ny teny fivarotana ianao. Ny mpivarotra dia manana fe-potoana samy hafa ary mety manana fe-potoana samihafa aza arakaraka ny entana.
Vakio àry ny famaritana ary raha misalasala ianao dia manontania fanontaniana betsaka araka izay tratranao alohan'ny hamelezana ny bokotra mividiana mba hamonjy ny olana rehetra. (Mozika disko maivana) Ny toerana manaraka amin'ny lisiko hividianana entana dia iray, izay misy sarany fidirana nefa tena mendrika izany raha ny hevitro. Ny ExpertVoice dia tranonkala iray izay amidin'ny marika ny vokariny amin'ny fihenam-bidy lehibe ho an'ny fanehoan-kevitra ary vao mainka mahazo vahana bebe kokoa.
Somary influencer an-tserasera fotsiny izy io, saingy tsy misy fahatsapana poakaty ny fivarotana ny fanahinao amin'ny vokatra maimaim-poana. Maniry aho raha afaka mampiseho aminao ny pejy lehibe nidirako mba hahafahanao mahita izay misy, saingy tsy maintsy mieritreritra aho fa mifanohitra amin'ny fepetra sy fepetra izany ka ataoko milamina fotsiny. Ny azoko lazaina aminao anefa dia misy marika marobe fanta-daza any, ny sokajy akanjo ivelany sy bisikileta, fitaovana elektronika sy kojakoja, kojakoja bisikileta ary fitaovam-bisikileta ary koa bisikileta feno aza.
Izany rehetra izany, ary ny sasany amin'ireo marika dia manolotra hatramin'ny 60%, izay azo antoka fa tsy sangisangy. Mazava ho azy fa misy teritery sasantsasany amin'izany, noho izany mila manamarina ianao, fa amin'ny ankapobeny dia voafetra amin'ny ohatrinona sy impiry ianao no afaka mividy. Satria ity koa dia karazana amboarina amina ambasadaoro marika, mila mahafantatra zavatra farafaharatsiny momba ny orinasan'izy ireo sy ny vokatra ianao, noho izany dia mila maka ireo fampianarana an-tserasera kely ireo ianao ary mamaly ireo quizs amin'ny farany.
Eto aho hilaza aminao fa tena mora raisina izy ireo, azonao atao ny mitsoka be ny sainao amin'ny ora fisakafoanana ka aza matahotra, koa ahoana no hidiranao? Mila mandany 500 $ isan-taona ve ianao vao ho mpikambana? p? Raha ny marina tsia, mora vidy izy ary afaka amin'ny fomba hafa. Rehefa lasa mpikambana ao amin'ny IMBA, ny International MountainBike Association ianao, dia mahazo ny fidirana amin'ny ExpertVoice ho iray amin'ireo tombony azonao. Ny maha-mpikambana ao amin'ny IMBA dia mora tahaka ny $ 40 isan-taona, ary izany vola izany dia mankany amin'ny vondron'olona bisikileta an-tendrombohitra iray manontolo.
Manampy ny olona hitazona làlana sy hanokatra làlana vaovao izy io, ary afaka miditra amin'ny governemanta eo an-toerana mihitsy aza hahazoana fidirana an-tany bebe kokoa. Fandresena fandresena lehibe amin'ny ankapobeny, sa tsy izany? Afaka miditra maimaimpoana ianao izao raha fifanarahana amin'ny alàlan'ny mpampiasa anao. Ka miresaha amin'ny olona amin'ny marketing na amin'ny loharanon-karena olombelona ary jereo raha mety afaka miditra amin'ny adiresy mailakao ianao amin'ny alàlan'ny asa, na raha misy kaody id id ampiasain'izy ireo.
Tsy maharary mihitsy ny manamarina. Raha tsy izany dia afaka mahazo $ 40 isan-taona mora ianao amin'ny fihenam-bidy azonao. (Mozika malaza) Manana ny zavatra hatao izahay amin'ny farany.
Ny toerana tiako indrindra hatreto, ary eto Colorado izy io. Ny Pros Closet dia? tranokala iray ahafahanao mividy bisikileta sy singa bisikileta vaovao sy efa niasa amin'ny vidiny mirary mampihomehy. Nahita kodiarana Maxis High Roller II vaovao teto tokoa aho $ 14 isaky ny iray, very saina izany.
Ary avy eo dia hitako ity cassette SunRace 11-50 nify50 ampiasaina amin'ny $ 48 ity izay antsasaky ny vidin'ny antsinjarany. Ankehitriny dia misy ny akanjo sy rovitra kosmetika satria napetraka fotsiny izy ireo. Heveriko fa fampisehoana fampisehoana fampisehoana fotsiny io raha ny tena izy satria ny nify dia milamina tsara.
Tsy nahita tombony izany tamin'ny ankapobeny. tena tsara, mahita be. Raha manontany tena ianao hoe avy aiza no hakany ny lisitr'izy ireo rehetra dia mifangaro kely izy io, saingy ny fototry ny asany dia ny mitondra bisikileta sy singa ampiasaina any am-pivarotana.
Aza mahita izany fakana fanahy izany satria azonao ny mividy moto efa niasa, tsy tianao. Rariny tanteraka. Na izany aza, tokony holazaiko fa ny Pros Closet dia mahavariana tokoa ary niantso izy ireo nandritra ny fizotrany.
Ireo zalahy ireo dia manamarina izay rehetra miditra, ataon'izy ireo antoka fa tsy angalarina ny bisikileta miditra, ary hadio tanteraka izy ireo. Ambonin'izany, manana mpaka sary matihanina maka sary ny zava-drehetra izy ireo. Io dia ahafahanao mahita izay zavatra novidinao izay fantatry ny olona manao azy.
Tsy Yahoo kisendrasendra fotsiny ianao mamely fitendry, miaina sy miaina fitaovana bisikileta ireo olona ireo mba hahazoanao statistika tena misy antsipiriany. Raha ny marina dia mandanja ny entana tsirairay aza izy ireo mba ho hitanao fa ohatrinona ny gropy raha ny grama. Amin'ny fomba hafa, mahazo be dia be amin'ny lisitr'izy ireo izy ireo amin'ny alàlan'ny fandehanana any amin'ireo orinasa toy ny fivarotana bisikileta sy ireo mpivarotra hafa izay manana be loatra. ary vidio fotsiny.
Io dia ahafahan'izy ireo maka paleta kodiarana Maxis ary mivarotra azy ireo amin'ny $ 14 isaky ny pop, mba hahafahanao mahazo zava-baovao amin'ny vidiny ampiasaina na mora kokoa aza. Te hampahafantatra aho fa manana politikan'ny famerenana andro 30 santimetatra izy ireo, koa raha mahazo zavatra izay tsy tena araka ny noeritreretinao ianao fa tsy nokasihinao tanteraka, miampy zavatra iray hafa horesahina rehefa mifantoka amin'ny varotra izy ireo rehefa ianao manana zavatra somary lafo nefa manana fitaovam-bisikileta taloha ianao izay mila ilainao ihany fa afaka manonitra izany vidiny izany ary manampy anao hampifaly kokoa ny iray hafa manan-danja kokoa amin'ny famafana ny lalimoara feno entana bisikileta izay nianiana ianao fa hanao zavatra. Ka eo ianao no manana azy.
Ampahafantaro ahy amin'ny hevitra etsy ambany inona? nieritreritra momba an'ity lahatsoratra ity ianao ary raha sendra zavatra tsy hitako. Raha tianao ilay lahatsoratra, atolory ny ankihiben-tànanao ary angamba zarao amin'ny namana iray izay mitady hanatsara ny bisikiletany amin'ity ririnina ity. Raha vaovao amin'ny fantsona ianao dia tongasoa.
Manasa anao aho hamely ny bokotra 'Subscribe' tokony ho any amin'ny toerana iray eto ary alao antoka fa mikapoka ny kisary fampandrenesana lakolosy eo akaikiny ianao mba tsy halainao ny lahatsoratra manaraka. Fa mandra-pahatongan'izany, ny olon-drehetra, na inona na inona bisikiletanao, alao izy ary ampiasao mba hahitanao ny fiainanao manaraka. Mangatsiahatsiaha.
Reddit tsara ve ny bisikileta KHS?
KHSmidika hoe Fahalalana, Fahasalamana ary tanjaka. Niorina tamin'ny 1974 avy amin'i Wen Hsieh, nyKHSmarika bisikileta dia ao anatin'nyKHSCo. Ltd., ary UEC (United Engineering Cooperation) izay manamboatra bisikileta, môtô ary zavamaneno mozika an'ny Yamaha any amin'ireo ozinina feno ao Taiwan.
Ohatrinona ny bisikileta KHS?
Tiako be io. Izany diaTSARAvita ary manana fahatsapana mafy orina. Tsy manana fitarainana aho.khsnanao ny sasany tenabisikileta mahafinaritra, marika tiawan kely kokoa, saingy manana izy ireotsarazavatra hafa, koa zavatra ok ho an'ny antonony.26 mart 2018
Tsara ve ny bisikileta KHS BMX?
KHSmbola tsy nahomby tamin'ny fotoana lehibe na dia nanao azabisikileta tsara. Mora mividy paikady stratejika amin'ny singa sasany izy ireo, saingy manao tsara tarehytsaraasa misafidy ny toerana mety hialana voly. Ny vy vyzana-kazomitaingina tena izyTSARAary mbola mahomby ihany. Ankafiziko ireo nananako.
Ahoana ny fandrefesany ny haben'ny bisikileta?
Ny ankamaroan'ny mpanamboatra izaoohatrany vatan-kazo afovoan'ny afovoan-tongony, hatrany an-tampon'ny fantson'ny seza. Ny ankamaroan'ny lalanabisikiletadianorefesinyamin'ny santimetatra (cm), fa ny tendrombohitrabisikiletaamin'ny ankapobenynorefesinymampiasa santimetatra (in). Ankizybisikiletadianorefesinyamin'ny kodiaranaSizefa tsy frameSize.
Tsara ve ny bisikileta 26 santimetatra?
'26”Ny haben'ny kodiarana dia mety indrindra amin'ny ankamaroan'ny olon-dehibe ahahavonyambonin`ny 6 metatra. Ny ankamaroan'ny bisikileta fitetezana sy bisikileta hybrid dia misy kodiarana metaly 700C, izay fantatra koa amin'ny anarana hoe 29-santimetatrakodiarana.
Tsara ve ny bisikileta 26 ho an'ny olon-dehibe?
26'+ Tsingerin'ny kodiarana -metyho an'ny taona 11+ (Ireo dia sokajiana hoolon-dehibetsingerina.)
Moa kely loatra amiko ve ny bisikileta 26?
Ka,26kodiarana santimetatra, an-tendrombohitrabisikiletaNy sahan-kevitra dia mety tsara ho an'ny olona manodidina ny 4'10 2 -5′2 ″ mba hahatrarana ny fifandanjana tsara indrindra eo amin'ny lanjany, ny fahaizan'ny rollover ary ny fikirakirana azy. Voalaza fa, hitsangatsanganabisikiletaeo amin'ny lampivato, misytenatsy misy fetra amin'ny halavan'ny mpitaingina azy.
Inona no haavony tsara ho an'ny bisikileta 26 mirefy?
* CruiserbisikiletaAmpiasao26Kodiarana. Raha ny marina dia tsy misy izany26-bisikileta santimetatra. Misybisikiletaamin'ny26-santimetatrakodiarana, izaymetyho an'ny haavony eo anelanelan'ny 5'0 ″ sy 5'5 ″. Izay lava kokoa noho io dia mety te hitady abisikiletamisy 700c, 27,5 ″ (Mitovy amin'ny 650b) na kodiarana 29 ″bisikileta.
Tokony hahazo bisikileta 26 na 28 inch ve aho?
Ny zava-dehibe indrindra dia nymahazoframe izay mifanaraka aminao ary manana geometry milamina. Raha latsaky ny 170cm na mihoatra ny haavonao,26'kodiarana mety misy dikany kokoa amin'ny abisikiletakely izany. Amin'ny habe kely kokoa dia miaraka26'kodiarana ary28kodiarana amin'ny habe lehibe kokoa.13 Mey 2014
Mihevitra ve ianao fa bisikileta KHS dia bisikileta tsara?
KHS dia mbola tsy nahomby tamin'ny fotoana lehibe na dia nanao bisikileta tsara aza. Izy ireo dia mazàna mividy paikady stratejika amin'ny singa sasany, saingy manao asa tsara izy ireo amin'ny fisafidianana ireo toerana mety hialana. Mandeha tena tsara ny zana-by azy ireo ary mbola henjana ihany. Ankafiziko ireo nananako. Nanaiky.
Bisikileta tsara ve ny KHS sixfifty 7500?
… Ny KHS SixFifty 7500 dia sisin-tany enduro / an-tendrombohitra avo lenta izay hampiakatra haingana ny mpandeha ny lalana ary hihemotra haingana kokoa aza. Ilay 680+… tena namiratra tamin'ny fidinana, na eo aza ny tsy fahampian'ny squish ao aoriana.
Iza no marika goavam-be an-tendrombohitra na KHS tsara indrindra?
KHS no marika azo inoana fa ho raisina amin'ny ambaratonga mitovy amin'ny Giant. Ny bisikileta Marin dia avy any amin'ny County Marin any California natsangana tamin'ny taona 1986, tranon'ny bisikileta an-tendrombohitra voalohany. Malaza indrindra amin'ny bisikileta an-tendrombohitra tsy mampino i Marin, ary mitondra bisikileta feno bisikileta feno bisikileta ary bisikileta hybrid ihany koa.